THE Taariikhda Shirkadda Mas-mask - Jiande Chaomei Daily Chemicals Co., Ltd.
Lin Jinxiang, aasaasihii Chaomei - hogaamiyaha gudaha ee berrinka ilaalinta neefsashada
Madaxweyne kuxigeenka Ururka Ganacsiga Dharka Shiinaha, Madaxweynaha Zhejiang Badbaadada iyo Caafimaadka Warshadaha Waxsoosaarka Warshadaha, Gudoomiyaha Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd.
Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. waa "calaamad dahabi ah" oo la aqoonsan yahay oo ku saabsan aagga ilaalinta neefsashada ee warshadaha caymiska shaqaalaha gudaha. Ka dib in ka badan 40 sano oo shaqo adag ah, oo uu hogaaminayay gudoomiyaha Lin Jinxiang, Chaomei wuxuu kujiray safka hore ee alaabooyinka la midka ah marka la eego miisaanka ganacsiga, saamiga suuqa iyo saamaynta summada, waxaana lagu soo daray dufcaddii saddexaad ee "Lagu sameeyay Zhejiang" unugyada diyaarinta caadiga ah, "PM2.5 Masks Protective" cutubka qaabeynta heerka kooxeed, iyo unugga diyaarinta ee heerka qaran ee kahortaga neefsashada walaxda. Waqooyiga Kuuriya kaliya ma aysan helin liisanka wax soo saarka wax soo saarka warshadaha qaranka, laakiin sidoo kale liisanka maaskaro caafimaad iyo caafimaad. Waa mid ka mid ah shirkadaha yar ee gudaha ah ee soo saari kara maaskaro ilaaliya caafimaadka, warshadaha, rayidka, iyo caafimaadka.
Intii lagu gudajiray, Lin Jinxiang wuxuu dareemayaa inay jirto waddo dheer oo loo maro, wuuna ku dhiirran maayo inuu yara yaraado, isagoo ku hogaaminaya shirkada inay si geesinimo leh ugu soo baxdo safka hore ee dhaqaalaha suuqa oo ay dib u cusbooneysiiso. Dhawaan, tifaftiraha Shabakadda Caymiska Shaqaalaha ee Shiinaha ayaa wareysi gaar ah la yeeshay Guddoomiyaha Lin Jinxiang.
Waad u adkaysan kartaa kalinimada, waxay qabsan kartaa riyooyin
Astaamaha waxqabadka leh ee Lin Jinxiang waxay ka yimaadeen khibradiisii ​​hore. Dib u milicso 1978, ninkan beeraleyda ah ee yar wuxuu bilaabay ganacsigiisa isagoo iibinaya gaari xaabo ah 30 yuan iyo amaah 20 yuan. 10 sano gudahood, wuxuu ahaa maamule iyo iibiye, iibinta mops, galoofyo gacmeed, iyo qalabka wax lagu xardho. Si lacag loo dhigto bilowga meheradda, Lin Jinxiang wuxuu qaatay keegga bariiska ee hooyadiis samaysay markasta oo uu u baxayo inuu gaajo ka buuxiyo. Daaweynta ugu fiican habeenkii waxay ahayd hudheel habeenkii shan yuan ah, wuxuuna ku hoyan jiray meelaha gabaadsan. Inta badan meelaha la geeyo waa buuro, buurbuur iyo khatar. Lin Jinxiang ma uusan ogeyn inta dhidid ee uu ku daadiyay safarka dheer. Erayadiisa, ma jiraan wax fudud oo adduunka lagu sameeyo. Haddii aad rabto inaad xirato taaj, waa inaad marka hore qaaddaa culeyska.
In kabadan 20 sano waa da'da lagu dhiirado in shaqo adag la qabto. Lin Jinxiang ayaa yiri: "Waan lumay markii aan la kulmay dib u dhac, laakiin waligey kuma fikirin inaan is dhiibo. Haatan waxaan aad ugu hanweynahay inaan aasaaso barxad warshadeed oo loogu talagalay carruurta leh sannado shaqo adag ah. Waxaan u maleynayaa in ganacsade kasta uu jecel yahay Ganacsiga aan Waxaan ku dadaalayay in la ii gudbiyo, hadana waxaan arkaa labadayda wiil oo si adag ugu shaqeynaya sumcad wanaagsan oo Kuuriya-Mareykan ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay. "
Isaga oo ka hadlaya dhibaatooyinkii hore, Lin Jinxiang ma lahayn shucuur badan, “Runtii, jiilkeennu waa nasiib. Dib-u-habeynta iyo furitaanka ka dib, siyaasadda qaranku waxay dhiirrigelisaa ganacsiga, markaa waxaan fursad u haystaa inaan sameeyo waxa aan doonayo. Haddii qofku doonayo inuu guuleysto, Ugu horreyntii, waa inaan baranno u adkaysiga dhibaatada, u adkaysiga kalinimada, iyo inaan ku riyoonno riyooyin. "
Gudan masuuliyada bulshada kana hadal caymiska shaqada
Sannadkii 1996-kii, Lin Jinxiang wuxuu bilaabay inuu sameeyo wershad soo saarta waji-hoosaadka iyadoo loo marayo soo bandhigidda saaxiibkiis, laakiin bilowgii, tira-koobka ayaa ka badatay iibka oo xumaaday. Markuu arkay in shirkaddu ku jirto dhibaato dhaqaale, qoyskiisa waxay u isticmaaleen dhammaan keydkoodii inay ku taageeraan. Taasi waa, laga bilaabo waqtigaas, Lin Jinxiang waligiis ma jajabin inkasta oo ay jiraan dhibaatooyin waaweyn oo soo foodsaaray: Sameynta wax soo saar wanaagsan iyo shirkad wanaagsan ayaa ah soo celinta ugu wanaagsan ee qoyskiisa.
Bilowgii, waxaan kaliya ka fikiray in sameynta ganacsiga caymiska shaqaaluhu ay taageeri karto qoyska, laakiin markaan sidaas sameeyo, waxaan jeclaaday warshaddan wanaagsan ee wanaagsan. Sida ku cad odhaahda caanka ah ee hadda jirta, waxaa loo yaqaanaa iyadoo aan la iloobin ujeedkii hore. Markaad ka fikirto hadda, dardaaranku mararka qaarkood waa wax wanaagsan. Adiga dartiis Diyaar u ahaanta, fikradaha qaarkood ayaa had iyo jeer maskaxdaada ku jiri doona. Ma ogi nooca midhaha ay dhali doonto ... "Lin Jinxiang wuxuu jecel yahay inuu ku fikiro cilmi baaris. wuxuu leeyahay aragti u gaar ah suuq geynta. Wuxuu u heellan yahay xirfad. Oo "kasnimo" ayaa isaga ka dhigtay, oo waxay ka dhigtay Kuuriya iyo Ameerika maanta.
SARS waxay kacsaneyd 2003, warbixinnada "Neefsashada Neefsashada daran (SARS)" ayaa ka soo muuqatay meelo badan oo adduunka ah. Indooniisiya, Filibiin, Singapore, Thailand, Fiyatnaam, Mareykanka, Kanada iyo dalal kale ayaa si isdaba joog ah loogu arkay kiisas badan oo SARS ah. Sannadkii 2004, Waaxda Kiimikada Caafimaadka ee Guddiga Qaranka ee Horumarinta iyo Dib-u-habeynta ayaa go'aamisay in Kuuriyada Woqooyi iyo Mareykanku ay noqdaan dufcaddii ugu horreysay ee shirkadaha keydka ah ee gargaarka degdegga ah ee waddanka (Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka waxay ahaayeen gurmad qaran. Qaybta keydka maadada 14 sano oo xiriir ah). Ilaa maanta, Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka ayaa wali mas'uul ka ah bixinta dalka. Hawsha muhiimka ah ee sahayda gargaarka degdegga ah. Lin Jinxiang wali wuxuu si cad u xasuustaa goobta 200,000 oo waji duubis ah oo diyaarad qaas ah loogu qaaday isbitaalka Beijing Xiaotangshan. Markay arkeen goobta uu ka dhacay shirka jaraa'id, hogaanka dhexe iyo dhamaan shaqaalihii xirnaa maaskarada Woqooyiga Kuuriya iyo Ameerika, Lin Jinxiang wuxuu markii ugu horaysay dareemay ujeedada sharafta leh ee qofka caymiska shaqada.
Intii lagu jiray muddadii SARS, Kuuriyada Woqooyi iyo Mareykanka waxay ku adkaysteen inaysan kor u qaadin dinaar isla markaana ay si qaraar u xambaaraan waji-furka meelaha loogu baahnaa. Tani waxay ku guuleysatay amaan ay ka heleen asxaabta warshadaha waxayna aasaaseen booska hogaaminta Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka ee warshadaha caymiska shaqaalaha.
Ka dib SARS, Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka waxay fiiro gaar ah siiyeen fulinta gudashada waajibaadka bulshada ee shirkadaha: Haddii ay ahayd dhulgariirkii Wenchuan, qaraxii ka dhacay Port Tianjin, ama dillaaca hargabka shimbiraha, Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka waxay si aan leex leexad lahayn u bixiyeen ilaalin neefsasho oo bilaash ah. alaabooyinka aagga musiibada markii ugu horreysay. Isla mar ahaantaana, quruxda Waqooyiga Kuuriya sidoo kale waxay ku firfircoon yihiin hawlo badan oo bulsheed sida codka wanaagsan ee Jiande City, casho loogu talagalay waayeelka xafladda Labaad ee Sagaalaad, maalgelinta Waxqabadka 'Spring Breeze Action' ee Xarunta Nadaafadda Magaalada Jiande, maalgelinta ardayda kulleejada u baahan, iyo wadashaqeynta dowladda hoose si loo dhiso jardiinooyin loogu talagalay dadka tuulada. .
In kor loogu qaado qiimaha sumadda iyadoo la adeegsanayo ikhtiraaca farsamada
Lin Jinxiang ayaa yiri: "Haddii aadan ka faa'iideysan karin mowjadaha, ugu dambeyn waxaa lagaa baabi'in doonaa waaga cusub".
Sanadihii la soo dhaafay, mowjadaha xogta weyn, sirdoonka macmalka ah, iyo internetka, Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka waxay si firfircoon uga jawaabeen baaqii dalka ee ahaa in la wanaajiyo tayada, isbadal dhanka teknolojiyad ah oo la xoojiyo, aagagga adeegga wax soo saarka la dheereeyo, iyo marinnada suuqgeynta oo la ballaariyo. Maanta, Chaomei waxay leedahay xarumo imtixaan oo heer-koowaad ah, xarumaha R&D iyo xarumaha e-commerce ee gudaha iyo dibaddaba. Shirkaddu waxay soo saartaa oo soo saartaa wax soo saar ka badan 100 nooc iyo qeexitaanno labo taxane ah oo ah ilaalinta neefsashada iyo kiimikada maalin kasta dhaqda, waxayna heshay 4 ikhtiraac iyo 35 shatiyada nooca korantada. Qiimaha waxsoosaarka sanadlaha ah wuxuu ka kordhay 3 milyan yuan sanadkii 2000 ilaa in ka badan 200 milyan yuan.
Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka Nidaamka Maareynta Waxyaabaha Mareykanka
Sida laga soo xigtay Lin Jinxiang, nidaamka maareynta cusub ee shirkadda loo xilsaaray ee la adeegsaday ee loo yaqaan 'IoT management' ayaa ka caawin doona Woqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka inay horumariyaan waxtarka wax soo saarka, xasiliyaan tayada wax soo saarka, iyo inay hoggaanka u qabtaan helitaanka xakameynta iyo muuqaalka laga soo iibsiga alaabta ceeriin, wax soo saarka ilaa iibka "Shiinaha waa dal wax soo saar weyn, laakiin sanadihii la soo dhaafay, jawiga caalamiga ah iyo kan gudaha labadaba waxay dul dhigeen shuruudo sare warshadaha wax soo saarka. Iyadoo la la'yahay saami qaybsiga dadka iyo faa'iidooyinka qiimaha, qaabka koritaanka dhaqameed ee warshadaha wax soo saarka waa mid aan la sii wadi karin. Waxaan waa inay ku tiirsanaadaan tiknoolajiyadda Innovate si loo xaliyo dhibaatooyinka loona xoojiyo tartankeenna. "
Marka laga hadlayo dhaxalka shirkadaha, Lin Jinxiang wuxuu leeyahay fikradihiisa u gaarka ah, U daa jiilka soo koraya. Shirkado badan oo jaangooyooyin ah ayaa wax badan ka qaban kara wax ka yar uun inay hareerahooda oo dhan yihiin.
Sida uu rajaynayo, ku darista "jiilka labaad" ayaa u oggolaatay horumarka iyo dhaxalka ruuxa Kuuriyaan-Mareykan ah, wuxuuna ku kordhiyay dardar cusub shirkadda. Lin Jinxiang curadkiisa, Lin Yanwei, wuxuu hadda wakiil ka yahay Golaha Hangzhou ee Dawlada Hoose iyo gudoomiye ku xigeenka Xiriirka Warshadaha iyo Ganacsiga ee Jiande City. Waxaa kula taliyay Ururka Waxsoosaarka Waxsoosaarka Badbaadada iyo Caafimaadka ee Zhejiang inuu yahay maamule xirfadeed heer sare ah oo ka tirsan Gobolka Zhejiang wuxuuna mas'uul ka yahay iibinta wax soo saarka shirkadda. Wiilka labaad, Lin Yanfeng, waa xoghayaha laanta xisbiga ee shirkadda, wuxuu xubin ka yahay kooxda khabiirada warshadaha caymiska shaqaalaha ee Gobolka Zhejiang, iyo hoggaamiye teknoloji. Isaga ayaa inta badan masuul ka ah wax soo saarka. Inta badan cilmi-baarista iyo horumarinta iyo hagaajinta khadadka wax-soo-saarka madax-bannaan ee Kuuriyada Waqooyi waxay ka yimaadaan gacmihiisa.
Lin Jinxiang wuxuu yiri kadib markuu noolaa caymiska shaqada, sidoo kale wuxuu yeeshay saaxiibo badan. Caymiska shaqadu waa ganacsi aad u wanaagsan. Kasbashada nolol, ka sokow waxay ilaalinaysaa caafimaadka iyo badbaadada kuwa kale; waa ganacsi mas'uul ah. Soosaarka alaabada caymiska shaqaaluhu waa inuu noqdaa mid kaamil badan oo u hoggaansama tayada. Dareenka shaqsigan caymiska shaqada ayaa si muuqata uga dhex muuqda isaga. Si si fiican loogu adeego warshadaha loona xoojiyo horumarka warshadaha, Lin Jinxiang wuxuu u adeegay madaxweyne kuxigeenka kaliya ee warshadaha waxsoosaarka caymiska shaqaalaha ee Ururka Ganacsiga Dharka ee Shiinaha iyo gudoomiyaha Ururka Warshadaha Badbaadada iyo Badbaadada Caafimaadka ee Zhejiang, tusaale u noqoshada iyo u adeegida warshadaha caymiska shaqaalaha si kal iyo laab ah.
Ha iloobin ujeedkii asalka ahaa, sii wad, oo had iyo jeer raac xisbiga. Lin Jinxiang wuxuu dhiirrigeliyaa isbeddelka iyo horumarka shirkadda oo leh koox koox oo tayo sare leh; ogaadaa "Lagu sameeyay Zhejiang" oo leh horumar ganacsi oo tayo sare leh; wuxuu u boodayaa dhanka wax soosaarka caqliga-dhamaadka sare wuxuuna kobciyaa "xikmadda Mareykanka". Xawaareynta hal-abuurnimada madax-bannaan iyo hagaajinta nidaamka jira, Waqooyiga Kuuriya iyo Mareykanka ayaa horay u sii wadaya safarka cusub ee dhismaha astaanta caymiska shaqaalaha qaranka, iyagoo soo bandhigaya mas'uuliyaddooda magaca weyn, waxayna wax badan ku biirinayaan caafimaadka shaqada ee shaqaalaha Shiinaha!